Asa fanaovan-gazety : Mandra-pahoviana vao hilanto ny fisavorovoroana ?
lundi, 04 octobre 2021 10:53
Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Efa tokony havaozina ny mpikambana mandrafitra ny birao. Eo no mampifandrirotra ka mampizara ny samy mpanao gazety andaniny, ary ankilany ny mpanao gazety sy ny fanjakana amin’ny alalan’ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina.
Efa hatramin’ny 2017 no tokony nanaovana ny fifidianana nanavaozana ny birao ny olana, nateraky ny tsy fahatomombanana teo amin’ny famoahana karatra maha mpanao gazety.
Tsy nijanona ho fifandiran-kevitra fotsiny anefa fa nanjary nampizara ny mpanao gazety indray koa ny nivoahan’ny lalàna faha 2020-006 manova ny andininy sasany tamin’ny lalàna faha 2016-029 tamin’ny 24 aogositra 2016, mifehy ny serasera, mifanaraka tamin’izay narafitra taorian’ireo fakan-kevitra nataon’ny Holafitra amperin’asa ka natolotra ny minisitry ny serasera.
Ho fampiharana io lalàna io no nananganana vaomiera hamoaka karatra maha mpanao gazety sy nanomanana fifidianana izay ho filoha sy ireo mpikambana ao amin’ny biraon’ny Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara, izay kasaina hatao amin’ny 16 oktobra 2021 izao.
Toy ny menaka nararaka anaty afo indray anefa ilay fanaovana fifidianana amin’ny 16 oktobra satria vao maika nampivaky ny mpanao gazety.
Andaniny ny lisitra tokana misy olona 93, takian’ny lalàna, hany nirotsaka hofidiana izay tohanan’ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina.
Ankilany ireo andiana mpanao gazety mitsipaka marindrano ny fanaovana fifidianana sy ny fomba nahatongavana amin’izany.
Nanao fanambarana ireto farany ny alahady 3 oktobra 2021, fa mitsangana ny “Cellule de crise” hiarovana ny mpanao gazety sy ny asa fanaovan-gazety manoloana ny ambaran’izy ireo fa tsindry sy fitsabahan’ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina amin’ireo dingan’ny fikarakarana ny fifidianana, ary koa ny fampisaraham-bazana ny mpanao gazety.
Hatreto dia hotanterahina amin’ny 16 oktobra 2021 ny fifidianana hanavaozana ny biraon’ny Holafitry ny mpanao gazety, ary efa nanomboka fampielezan-kevitra amin’izany ny kandida tokana, Rasoloarison Harimbola Monica, mpanao gazety ao amin’ny RNM (Radio Nasionaly Malagasy).
Milaza ho efa nanomana paikady ary hiditra amin’ny dingana mafimafy koa ny “Cellule de crise”.
Heno koa anefa fa amin’ity herindnro ity no hanendry izay ho solontenan’ny mpanao gazety ao amin’ny Vaomiera mahaleotena momba ny fifidianana na CENI ny Holafitra mbola amperinasa. Azo antoka fa dia hitovana ny disadisa aorian’izay.
Hery fahaefatra eto amin’ny firenena ny serasera sy fanaovan-gazety. Mety ho pitik’afo tsy hay vonoina ity sarovororo lavareny ity raha tsy voalamina haingana, ka hisy hanararaotra hampifandray izany amin’ireo olana sosialy sy tsy fandriampahalemana miseho lany etsy sy eroa.